Amandla eziMxholo ezingamashumi amabini elinanye zeWordPress | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 29, 2011 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ngempelaveki, ndiye ndatshintsha eyam WordPress isihloko sibuyele kwi Amashumi amabini aneshumi elinanye. Ndingatsho ngokunyanisekileyo ukuba ndonwabile kuyilo ngoku. Ndiyilungiselele ukuthanda kwam kwaye andikhange ndibambe khowudi. Ngoku ungandivi kakubi, kukho amaxesha apho ndithanda ukuntywila ngqo kumxholo kunye nokuqhekeza into engekhoyo, kodwa ukubhloga kunzima ngokwaneleyo njengoko kunjalo. Andifuni naluphi na uxinzelelo olongeziweyo malunga noyilo olungafakwanga umgca, okanye ukuphinda-phinda iimpazamo ngenxa yokuba enye idatha ayichazwanga ngokuchanekileyo. Ngoku ndingagxila kubhloga.
Umxholo wamashumi amabini aneshumi elinanye awukho mhle kwaye ulula, kodwa ukomelele kwaye ubhetyebhetye kakhulu. Yenziwe liqela leWordPress, oko kuthetha ukuba abantu abayiqonda ngokupheleleyo kwaye bayayiqonda ngaphakathi nangaphandle iWindowsPress benze umxholo wokulawula konke.
Amashumi amabini ananye amanqaku:
Ukukhanya kunye noMnyama izikimu zemibala
Guqula umbala wekhonkco
Iikholamu ezimbini, ibar yecala lasekunene; Iikholamu ezimbini, ibha esecaleni ngasekhohlo; Ikholamu enye, akukho bar esecaleni
Iifomathi ezisixhenxe ezahlukeneyo onokukhetha kuzo
Guqula umfanekiso ongasemva kunye / okanye umbala
Bonisa / fihla intloko
Bonisa / fihla imifanekiso ebonakalayo
Zonke ezi zinto unokukhetha kuzo ziyahlelwa kwimenyu yokubonakala.
Ngaphandle kweempawu ezongeziweyo zomxholo, ufumana into kanye onokuyilindela kumxholo opheleleyo we-WordPress:
Imifanekiso ebonisiweyo ngeposi
Iwijethi enakho ngokupheleleyo
I-SEO inobuhlobo, nangona kuya kufuneka usebenzise i Yoast WordPress SEO Faka iplagi
Into yokugqibela oyifunayo kukudibanisa Iplagi yeWP yokuChukumisa kwaye ulungele iselfowuni, nayo! Ndiyayazi imvakalelo yokufuna oyilo / umxholo ogqibeleleyo weendawo zam - ezobuchwephesha kunye nezobuqu ngokufanayo. Kulula ukulahla umkhondo weyona njongo yakho: ukubhloga! Amashumi amabini aneshumi elinanye ngu khulula Isixhobo onokuthi usisebenzise ukunciphisa ii-oes zokwenza kunye nokulawula umxholo we-WordPress.
tags: I-autoresponderlogo ye-bmwukukhutshwa kwedathaspammers
Ngomhla wama-5 ku-Disemba 2011 ngo-11: 55 AM
Ndivumelene ngokupheleleyo nawe, kodwa ndilahlekile inye into kumxholo ka-2011-ayixhasi ibar esecaleni kwiposti nasemaphepheni, ke ngalo naliphi na ixesha xa useta ibhlog ngeli xesha kufuneka uphinde kwakhona kwaye uhlele i-single.php kunye nephepha .php iifayile.
Mar 16, 2012 ngo 8:41 PM
Ngaba ndingacebisa ukuba undwendwele http://www.borgyborgy.net Inika i-pixels yasimahla ye-1000 × 288 yezihloko zepikseli, ukwenza umxholo weTwentyEleven ongagqibekanga. Iluncedo kubasaqalayo bebhlog. Ikuvumela ukuba wenze ngokusesikweni ufakelo olusemgangathweni, uvumele i-newbie ukuba ibhlog yakho ebunjiweyo kwaye ilungile kwimizuzu embalwa. Yonke imifanekiso ithathwe ndim kwaye ibonelelwe phantsi kwelayisenisi yeCreative Commons 3.0.